TWT R & D zvikwata
TWT ane kwazvo mukuru hwokugadzira R & D zvikwata, vakapakata yepamusoro nemazvo michina R & D centre uye bvunzo pakati, pamwe kupfuura uye 50 makore pamusaka zvigadzirwa, R & D uye mukugadzira high quality, simba okuponesa uye kwezvakatipoteredza kudzivirira yepamusorosoro zvigadzirwa kambani yacho R & D mureza TWT. TWT kukura uye kugadzirwa kwezvinhu chigadzirwa akunda kupfuura uye 20 patents uye hwakawanda mibayiro National, uye ndiye muvambi Ushumiri michina indasitiri vharafu kugadzirwa mureza.
TWT Quality System uye Quality Panga
Tinotora zvinogadzirwa kuchengeteka uye rakavimbika unhu sezvo mweya Enterprise raMwari; muna China vharafu maindasitiri, tiri kutanga kuwana ISO 9001 zvitupa wakabudiswa DNV: 2008 Quality System advertising; uye isu vakanzwawo EU Pressure Equipment Directive 97/23 / EC (CE advertising) uye fekitari advertising kubudikidza CCS.
TWT Core Kukosha
Tiri nguva dzose mubasa kurovedza hwokugadzira vashandi kuitira kuti vatengi vanogona kunakirwa nezvakanakisisa pamabasa Industry. Nyanzvi yedu basa vari vapfumi zvakaitika naro, debugging uye kugadzira; uye zvigadzirwa vari kupembedza nhengo Inventory. We hunovimbisa kuti tinogona kutaura nokukuisa kupindura mukati maawa 48 pashure kugamuchira unhu zvichemo kana zvekushandisa rutsigiro chikumbiro kubva vatengi chero nzvimbo munyika. Unogona kutenda zvakanaka, pano, unogona kunakidzwa kusingaenzaniswi yepamusoro mabasa.
"Kutenda, Quality uye Innovation" ndiwo makirisito kukosha TWT Company
iyi ukoshi hurongwa ndiyo nheyo pfungwa Company uye tsika,
sezvakanga zvakafanana kana TWT kuti inception muna 1956.